Law & More व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछ। तपाईंलाई व्यक्तिगत डाटाको यस प्रसंस्करणको बारेमा स्पष्ट र पारदर्शी तरिकामा सूचित गर्न यो गोपनीयता कथन मस्यौदा तयार पारिएको छ। Law & More तपाईंको व्यक्तिगत डाटाको सम्मान गर्दछ र यो सुनिश्चित गर्दछ कि हामीलाई उपलब्ध गराईएको व्यक्तिगत जानकारी गोप्य तरिकामा ह्यान्डल गरिएको छ। यस गोपनीयता कथन को को को डाटा को जानकारी गर्न बाध्यता लागू गर्दछ Law & More व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछ। यो दायित्व सामान्य डाटा सुरक्षा नियमन (GDPR) बाट उत्पन्न भयो। यस गोपनीयता कथनमा व्यक्तिगत डेटाको प्रसंस्करणको बारेमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू Law & More जवाफ दिइनेछ।
Law & More तपाईंको व्यक्तिगत डाटाको प्रशोधनको सम्बन्धमा नियन्त्रणकर्ता हो। Law & More मा स्थित छ De Zaale 11 (5612 31१२ एजे) आइन्डहोभेन। यदि यो गोपनीयता कथनको बारेमा प्रश्न उठ्दछ भने, तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं हामी telephone१ (०) 0० 40 369 06 ०० मा टेलिफोनबाट र ईमेल मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ info@lawandmore.nl.
व्यक्तिगत डेटा सबै जानकारी हो जुन हामीलाई व्यक्तिको बारेमा केहि बताउँछ वा त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित हुन सक्छ। जानकारी जुन अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई एक व्यक्ति को बारे मा केहि बताउँछ, पनि व्यक्तिगत डेटा मानिन्छ। यस गोपनीयता कथनमा, व्यक्तिगत डेटाको अर्थ सबै जानकारी हुन्छ Law & More तपाइँबाट प्रक्रियाहरू र जसद्वारा तपाइँ पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ।
Law & More ग्राहकहरूको सेवाहरू प्रदान गर्न व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछ वा व्यक्तिगत डाटा जुन उनीहरूको पहलमा डाटा विषयहरू द्वारा प्रदान गरिन्छ। यसमा सम्पर्क विवरणहरू र अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू समावेश छन् जुन तपाईंको केस ह्यान्डल गर्नका लागि आवश्यक छ, व्यक्तिगत डेटा तपाईंले सम्पर्क फारमहरू वा वेब फारमहरूमा भर्नुभएको छ, जानकारी तपाईंले (परिचय) अन्तर्वार्ता समयमा प्रदान गर्नुभएको जानकारी, सार्वजनिक वेबसाइटहरूमा उपलब्ध व्यक्तिगत डेटा वा व्यक्तिगत डाटा जुन सार्वजनिक रेजिस्टरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, जस्तै क्याडस्ट्रल रेजिस्ट्री र वाणिज्य वाणिज्यको ट्रेड रजिस्टर। Law & More सेवाहरू प्रदान गर्न, यी सेवाहरू सुधार गर्न र डाटा विषयको रूपमा तपाईंसँग व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी गर्न सक्षम हुन व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछ।
जसको व्यक्तिगत डेटा द्वारा प्रक्रिया गरिएको छ Law & More?
यो गोपनीयता कथन सबै व्यक्तिको लागि लागू हुन्छ जसको डाटा द्वारा प्रक्रिया गरिएको छ Law & More. Law & More हामीसँग अप्रत्यक्ष वा प्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछ, चाहन्छौं वा सम्बन्ध थियो। यसले निम्न व्यक्तिहरू समावेश गर्दछ:
(सम्भावित) ग्राहकहरूको Law & More;
मानिसहरु का सेवाहरु मा चासो छ Law & More;
मानिस जो एक कम्पनी वा संगठन संग जोडिएको छ Law & More छ, गर्न चाहन्छ वा सम्बन्ध छ;
को वेबसाइटहरु को आगन्तुकहरु Law & More;
प्रत्येक अन्य व्यक्ति सम्पर्क छ Law & More.
व्यक्तिगत डाटाको प्रशोधनको उद्देश्य
Law & More निम्न उद्देश्यका लागि तपाइँको व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछ:
कानूनी सेवाहरू प्रदान गर्दै
यदि तपाईं हामीलाई कानूनी सेवाहरू प्रदान गर्न भाडामा लिनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई तपाईंको सम्पर्क विवरणहरू हामीसँग बाँड्न आग्रह गर्दछौं। यो मामलाको प्रकृतिमा निर्भर गर्दछ, तपाईंको केस ह्यान्डल गर्नका लागि अन्य व्यक्तिगत डाटा प्राप्त गर्न आवश्यक हुन सक्छ। थप रूपमा, तपाईंको व्यक्तिगत डाटा प्रदान गरिएको सेवाहरूको लागि इनभ्वाइस गर्नको लागि प्रयोग हुनेछ। यदि हाम्रो सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि आवश्यक छ भने, हामी तपाईंको व्यक्तिगत डाटा तेस्रो पक्षहरूलाई प्रदान गर्दछौं।
जानकारी प्रदान गर्दै
Law & More प्रणालीमा तपाईंको व्यक्तिगत डाटा रेजिष्टर गर्दछ र तपाईंलाई डाटा प्रदान गर्न यी डाटा भण्डारण गर्दछ। यो तपाईंको सम्बन्धको बारेमा जानकारी हुन सक्छ Law & More। यदि तपाईं संग सम्बन्ध छैन Law & More (अझै), तपाईं वेबसाईटमा सम्पर्क फारम प्रयोग गरेर जानकारी अनुरोध गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। Law & More तपाईंलाई सम्पर्क गर्न र तपाईंलाई अनुरोधित जानकारीको साथ प्रदान गर्न व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछ।
कानूनी दायित्वहरू पूरा गर्दै
Law & More कानूनी दायित्व पूरा गर्नका लागि तपाइँको व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछ। कानून र कानूनी बमोजिम कानून को नियमहरु अनुसार, हामी एक मान्य पहिचान कागजात को आधार मा तपाइँको पहिचान प्रमाणित गर्न बाध्य छौं।
भर्ती र छनौट
Law & More भर्ती र चयन को उद्देश्य को लागी तपाइँको व्यक्तिगत डेटा स col्कलन गर्दछ। जब तपाइँलाई रोजगार अनुप्रयोग पठाउनुहुन्छ Law & More, तपाइँको व्यक्तिगत डेटा भण्डार गरिएको छ कि छैन तपाइँ एक रोजगार साक्षात्कार को लागी आमन्त्रित गरीएको छ र तपाइँको आवेदन को सम्बन्ध मा तपाइँलाई सम्पर्क गर्न को लागी।
Law & More धेरै सोशल मिडिया नेटवर्कहरू प्रयोग गर्दछ, जस्तै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र लिंक्डइन। यदि तपाइँ सोशल मिडियाको सम्बन्धमा वेबसाइटमा कार्यहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, हामी तपाइँको व्यक्तिगत डेटा सम्बन्धित सामाजिक मिडिया नेटवर्कहरू मार्फत संकलन गर्न सक्षम छौं।
मापन व्यवसाय प्रयोग वेबसाइट
हाम्रो वेबसाइटको व्यावासायिक प्रयोग मापन गर्न हामी रोटरडममा लिडइनफो सेवा प्रयोग गर्दछौं। यस सेवाले हामीलाई कम्पनीका नामहरू र हाम्रा आगंतुकहरूको आईपी ठेगानामा आधारित ठेगानाहरू देखाउँदछ। IP ठेगाना समावेश गरिएको छैन।
व्यक्तिगत डाटाको प्रशोधनको लागि मैदानहरू
Law & More निम्न आधारहरू एक वा बढीको आधारमा तपाईंको व्यक्तिगत डाटा प्रक्रिया गर्दछ:
Law & More तपाईंको व्यक्तिगत डाटालाई प्रोसेस गर्न सक्दछ किनकि तपाईंले यस्तो प्रक्रियाको लागि सहमति दिनुभयो। तपाईंसँग यो सहमति जहिले पनि फिर्ता लिने अधिकार छ।
एक (अझै निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ) सम्झौताको आधारमा
यदि तपाई भाडामा लिनुहुन्छ Law & More कानूनी सेवाहरू प्रदान गर्न, हामी तपाईंको व्यक्तिगत डेटा प्रक्रियामा छौं यदि र यी सेवाहरू प्रदर्शन गर्नका लागि आवश्यक विस्तार गर्न।
तपाईको व्यक्तिगत डेटा कानूनी दायित्वहरूको साथ अनुपालन गर्न संसाधित हुनेछ। डच एन्टि मनी लॉन्ड्रिंग र आतंकवादी वित्तिय कानून अनुसार वकिलहरूलाई केहि जानकारी स collect्कलन र रेकर्ड गर्न बाध्य छन्। यसले अन्यमा ग्राहकहरूको पहिचान प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्दछ।
Law & More जब तपाइँसँग वैधानिक चासो छ र जब प्रक्रियाले एक असंगो तरिकाले तपाइँको गोपनीयतामा तपाइँको अधिकार उल्लंघन गर्दैन तब तपाइँको व्यक्तिगत डेटा प्रक्रिया गर्दछ।
तेस्रो पक्षहरूसँग व्यक्तिगत डेटा साझेदारी गर्दै
Law & More तपाईंको व्यक्तिगत डाटा तेस्रो पक्षहरूलाई मात्र खुलासा गर्दछ जब यो हाम्रो सेवाहरू प्रदान गर्न आवश्यक हुन्छ, पहिले उल्लेखित आधारहरूको सम्मान गर्दै। यसमा सम्झौताहरूको समापन, कानुनी प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यक्तिगत डेटा खुलासा गर्ने, काउन्टरपाटीसँग पत्राचार गर्ने वा तर्फबाट तेस्रो पक्ष सक्षम पार्ने र द्वारा कमिशन गरिएको समावेश हुन सक्छ। Law & Moreआईसीटी-प्रदायकहरू जस्तो। थप रूपमा, Law & More तेस्रो पक्षहरूलाई व्यक्तिगत डेटा प्रदान गर्न सक्दछ, जस्तै एक सुपरवाइजरी वा सार्वजनिक रूपमा नियुक्त अधिकार, इन्फोफर त्यहाँ त्यसो गर्न कानूनी कर्तव्य छ।
एक प्रोसेसर सम्झौता प्रत्येक तेस्रो पक्षको साथ निष्कर्षमा पुग्नेछ जसले तपाईंको व्यक्तिगत डाटालाई प्रोसेस र द्वारा कमिसन गर्दछ Law & More। नतिजाको रूपमा, प्रत्येक प्रोसेसर GDPR अनुपालन गर्न पनि बाध्य छ। तेस्रो पक्षहरू द्वारा सक्षम पारिएको Law & More, तर कन्ट्रोलरको रूपमा सेवाहरू प्रदान गर्नुहोस्, GDPR सँग अनुपालनको लागि आफै जिम्मेवार छन्। यसले उदाहरण लेखाकार र नोटरीहरूको लागि समावेश गर्दछ।
व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा
Law & More तपाईंको व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षा र सुरक्षालाई ठूलो हदसम्म महत्त्व दिन्छ र कलाको राज्यलाई ध्यानमा राख्दै जोखिमको लागि उपयुक्त सुरक्षाको स्तर सुनिश्चित गर्न उपयुक्त प्राविधिक र संगठनात्मक उपायहरू प्रदान गर्दछ। कहिले Law & More तेस्रो पक्षहरूको सेवाहरूको उपयोग गर्दछ, Law & More प्रोसेसर सम्झौतामा लिनु पर्ने उपायहरू बारे सम्झौताहरू रेकर्ड गर्दछ।
Law & More व्यक्तिगत डाटा भण्डार गर्नेछ जुन प्रक्रियाको लागि आवश्यक भएको भन्दा पहिले आवश्यक अभिलेखको लागि पहुँच गरिएको थियो जसको लागि डाटा संकलन गरिएको थियो, वा कानून वा नियमले आवश्यक भएको भन्दा बढि।
डाटा विषयहरूको गोपनीयता अधिकार
गोपनीयता कानून अनुसार, तपाइँसँग केही अधिकारहरू छन् जब तपाइँको व्यक्तिगत डेटा प्रसोधन भइरहेको छ:
तपाईलाई जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार छ कि तपाईको कुन व्यक्तिगत डेटा प्रक्रियामा छ र यी व्यक्तिगत डेटामा पहुँच गर्नका लागि।
तपाईंसँग कन्ट्रोलरलाई सही वा गलत वा अपूर्ण व्यक्तिगत डाटा पूर्ण गर्न अनुरोध गर्ने अधिकार छ।
इरेजरको अधिकार ('बिर्सनु पर्ने अधिकार')
तपाईंसँग अनुरोध गर्ने अधिकार छ Law & More प्रोसेस गरिएको व्यक्तिगत डेटा मेट्नको लागि। Law & More निम्न परिस्थितिहरूमा यी व्यक्तिगत डेटा मेटिनेछ:
यदि व्यक्तिगत डेटा अब तिनीहरू उद्देश्यको लागि संकलन गरिएको सम्बन्धमा आवश्यक छैन;
यदि तपाईं तपाईंको सहमति फिर्ता लिनुहुन्छ जुन प्रक्रियामा आधारित छ र प्रशोधनको लागि त्यहाँ कुनै अन्य कानुनी आधार छैन;
यदि तपाइँ प्रक्रियामा आपत्ति गर्नुहुन्छ र त्यहाँ प्रशोधनको लागि कुनै उपेक्षित वैधानिक आधार छैन;
यदि व्यक्तिगत डेटा अवैध रूपमा प्रक्रिया गरिएको छ;
यदि कानूनी बाध्यतासँग अनुपालनको लागि व्यक्तिगत डेटा मेटाउनु पर्छ भने।
प्रशोधनको प्रतिबन्धको अधिकार
तपाईंसँग अनुरोध गर्ने अधिकार छ Law & More व्यक्तिगत डेटाको प्रशोधन प्रतिबन्ध गर्न जब तपाईं यो विश्वास गर्नुहुन्छ कि केही आवश्यक जानकारी प्रशोधन गरिएको छैन।
तपाईसँग व्यक्तिगत डेटा प्राप्त गर्ने अधिकार छ Law & More प्रक्रियाहरू र ती डाटालाई अर्को कन्ट्रोलरमा प्रसारित गर्न।
तपाईंसँग अधिकार छ, कुनै पनि समय, द्वारा तपाईंको व्यक्तिगत डाटाको प्रकृया गर्न आपत्ति गर्न Law & More.
तपाईं पहुँच, सुधार वा समाप्ति, erasure, प्रतिबन्ध, डाटा पोर्टेबिलिटी वा दिइएको सहमति फिर्ता को लागी एक अनुरोध पेस गर्न सक्नुहुनेछ Law & More तलका ईमेल ठेगानामा ईमेल पठाई: info@lawandmore.nl। तपाईंले तपाईंको अनुरोधको जवाफ चार हप्ता भित्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यहाँ अवस्था हुन सक्छ Law & More (पूर्ण रूपमा) तपाईंको अनुरोध कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। यो उदाहरण को लागी केस हुन सक्छ जब वकिलहरु को गोपनीयता वा कानूनी धारणा अवधि संलग्न छन्।